Tsahivina fa noho ny fandehanana mafy nataon’ny fiara mpitatitra eo amin’ny kaoperativa koloina, nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tamin’ny lalana By-pass izay mampitohy an’ny Fasika Ankadimbahoaka mihazo an’Ambohimangakely, ny zoma hariva teo. Olona 3 no maty ary 19 no naratra mafy. Nofaohan’ilay fiara mpitatitra amin’ny zotra E ny mpanamory môtô iray. Avy eo fiara madinika nijanona tamin’ny sisin-dalana indray ka nahavoadona mafy ny renim-pianakaviana sy ny zanany 10 taona latsaka. Samy tsy nisy avotra ny ain’ireo telo ireo. Nivarina tany an-kady no niafaran’ilay fiara mpitatitra marika «Sprinter» avy eo ka nandratra ny ankamaroan’ireo mpandeha. Nentina teo amin’ny vonjy aina teo amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha avy hatrany ireo naratra ireo. Araka nyfampitam-baovao azo hatrany, nitsoaka ilay mpamily nahavanon-doza ary mbola karohina.